Skin Care – Yay Thu Ma
နေလောင် ထားတဲ့ အသားအရေ ကို ပြန်ပြီး ဖြူဝင်း စေမယ့် သဘာဝ နည်းလမ်း
အသားအရေ နေလောင် သွားတဲ့အခါ ဘယ်သူမဆို စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ နေပူ ထဲသွားရင်းနဲ့ သင့် အသားအရေ နေလာင်သွားတဲ့အခါ ပြန်ပြီး ဖြူဝင်း သက်သာချင်တာ လူတိုင်းရဲ့ သဘာဝ ပါပဲ။ အသားအရေ နေလောင် သွားလို့ စိတ်ညစ်နေသူတွေအတွက် သဘာဝ နည်းလမ်း ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ အသားအရေနေလောင်တဲ့အခါ အလှပြင်ပစ္စည်းတွေ များများဝယ်ပြီး လုပ်စရာမလိုဘဲ သဘာဝ နည်းလမ်း လေးနဲ့ ပြန်ပြီး ဖြူဝင်းစေနိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့...
ပျိုမေ တို့အတွက် skin care ရွေးချယ်နည်း
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်​… စစ်​​ပြောပြမှာက အသားအ​ရေ နဲ့ပတ်​သက်​ပြီးထိန်းသိမ်းရမည်းအ​ကြောင်းအရင်း​လေးပဲဖြစ်​ပါတယ်​ရှင့်​…. -အခု​ခေတ်​​နောက်​ပိုင်းကာလမှာ ပျို​မေ အများစုဟာ မိတ်​ကပ်​ ကိုအဓိက ဦးစား​ပေးလိမ်းခြယ်​လာကြပါတယ်​ရှင့်​…မိ်​တ်​ကပ်​ ကိုလိမ်းခြယ်မှလည်းကိုယ့်​ကိုယုံကြည်​မှုအပြည့်​နဲ့ confidence ရှိရှိနဲ့​ကြွားကြွားဝင့်​ဝင်​​ပြောရဲဆိုရဲမှာဖြစ်​ပါတယ်​ရှင့်​…. -အခု​ခေတ်​မှာ မိတ်​ကပ် ​ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ​မိမိသွားမဲ့​နေရာ​ပေါ်မူတည်​ပြီးလိမ်းခြယ်​လာကြပါတယ်​ရှင့်​… ထိုသို့လိမ်းခြယ်​တဲ့အခါမှာ…မိမိ အသုံးပြုလိုက်​တဲ့ comestic တချို့က မိမိ ရဲ့ အသားအ​ရေ ကိုအနည်းနဲ့အများ​တော့ ထိခိုက်​ပျက်​စီး​စေပါတယ်​ရှင့်​…… ထိုသို့ထိခိုက်​ပျက်​စီးမှုမရှိရ​အောင်​….မိမိ skin care ကိုအရင်​ဆုံးထိန်းသိမ်း​ပေးပါရှင့်​…ထိုသို့ထိန်းသိမ်းတဲ့အခါမလည်းနည်းစနစ်​မှန်​မှန်​ကန်​ကန်​ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်​ပါတယ်​ရှင့်​…. ပျို​မေ တချို့ဟာ skin care...
လူတိုင်းဟာ မိမိအသားအရေအမျိုးအစား ဘာဆိုတာသိဖို့ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ မိမိအသားအရေ အမျိုးအစားသိတော့မှသာ အသားအရေထိန်းသိမ်းရာမှာ ဘယ်လိုအလှကုန်တွေ ၀ယ်သုံးရမယ်ဆိုတာ သိပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ရင် ကိုယ့်အသားအရေနဲ့မတည့်တဲ့ အလှကုန်တွေဝယ်သုံးမိပြီး ၀က်ခြံထွက်တာ၊ allergic ဖြစ်တာမျိုးတွေ ကြုံကိုကြံရမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်အသားအရေက ဘာအမျိုးအစားမှန်းသိအောင် စစ်ဆေးနည်းလေးပြောပြပေးပါမယ်။ ဒီဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်တွေနဲ့ မိမိအသားအရေ ဘယ်လိုအမျိုးအစားဆိုတာ အလွယ်တကူ စစ်ဆေးသိရှိနိုင်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများ သူတို့အသားအရေအမျိုးအစားကို မသိဘဲ လွဲမှားစွာ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှု ပြုလုပ်နေတာ တကယ်အံ့အားသင့်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေဟာ...
မနက်နိုးလာတဲ့အခါ အသားအရေတွေနုပျိုလှပနေစေဖို့ ဘာတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်
ပျိုမေတွေ ညဘက် နောက်ကျအောင် နေမိလိုက်ပြီဆိုရင် နောက်တစ်နေ့ဆို zombie တွေလို အခြေအနေ ဖြစ်သွားကြတယ်ဟုတ်။ အဲ့ဒီလို မဖြစ်ရလေအောင် ပျိုမေအားလုံးအတွက် ပေးချင်တဲ့ နည်းလေးတွေရှိပါတယ်။ skincare နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဒီနည်းလေးတွေကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် နောက်တစ်နေ့လည်း သင်ဟာ လန်းဆန်းတက်ကြွနေပါလိမ့်မယ်။ ၁။ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်ပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက ဘက်တီးရီးယားတွေကို နည်းနည်းခြောက်လှန့်လိုက်ကြရအောင်။ ပထမဆုံး မတ်တပ်ရပ် ခြေထောက်ကို ပခုံးအကျယ်လောက်ကားပြီး ခြေထောက်ကို လက်နဲ့ထိတဲ့အထိ ကုန်းပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။...
မိမိအသားရေကို အနီးကပ်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင် သင့်မျက်နှာအသားအရေကနေ သင့်ကိုပြောပြပေးနေတဲ့ အချက်များစွာရှိပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ အကြီးဆုံးအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ အရေပြားက အကာအကွယ်တစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အပြင် ကျန်းမာရေးနဲ့ အလေ့အထတွေအားလုံးအပေါ် အသိအမြင်လည်း ရရှိစေပါတယ်။ သတိထားဖို့နဲ့ ဘယ်ပုံဘယ်နည်း ကုသမလဲဆိုတဲ့ အချက် (၄) ချက်ကတော့… ၁။ မျက်လုံးအောက် အရေပြားတွေ ခြောက်သွေ့နေရင် သင် ရေအလုံအလောက် မသောက်လို့ပါ။ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်မှုက အသားရေ ထိခိုက်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မျက်လုံးတစ်ဝိုက် အရေပြားကို တင်းမာပြီး...